Nagu saabsan - UNIKE Technology Limited
Injineeradeenu waxay in ka badan 10 sano oo khibrad LED ah iyo kooxdeena iibka ah ee lagu kalsoon yahay waxay ku siin doonaan taageero farsamo oo tayo sare leh iyo adeegyo kaa caawinaya inaad si fudud ugu ballaadhiso suuqaaga oo ay kuu xaqiijiso khibrad ganacsi oo raaxo leh. Waxaan haynaa xakameyn tayo sare leh dhammaan heerarka wax soo saarka, oo ay ku jiraan xakamaynta qalabka imanaya, kormeerka tayada ee hawsha, kormeerka socda iyo baaritaanka qaraabada. Intaa waxaa dheer, waxaan dhisi karnaa xakamaynta AQP iyo SPC iyadoo lagu saleynayo shuruudaha macaamiisha. Kuwaas oo dhami waxay noo suurta gelinayaan inaan damaanad qaadno qanacsanaanta macaamiisha. Warshadeena waxay sifiican ugu qalabeysan tahay si ay ugu haboonaato baahiyahaaga banaanka, oo leh kaladuwanaansho ballaaran, khibrad qani ah iyo dareen shaqo sare ee QC-gaaga, waan yareyn karnaa kharash kasta oo aan loo baahneyn. Guusheena waxaa go'aamiya ku qanacsanaanta iyo kalsoonida macaamiisheenna waxa aan qabanno iyo sida ugu wanaagsan ee aan u qabanno.
Waxaan si taxaddar leh u xulannaa dhammaan walxaha oo waxaan hubineynaa in dhammaan alaabada la dhammeeyay ee macaamiisha ay la kulmi karaan oo xitaa ka sarreeyaan rajadooda. Waxaan inta badan isticmaalnaa LED ka Lumileds, Osram iyo Cree, korontada ka timaada Mean Well, Philips, Inventronics, Sosen, Lifud iyo Done, iyo sidoo kale sumadeena gaarka ah ee UNIKE. Isku soo wada duuboo, wax soo saarkeenu wuxuu la kulmi karaa baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan laga bilaabo dhamaadka-dhamaadka ilaa suuqa-dhamaadka sare. Badeecadaheena badankood waxay bixin karaan seddex iyo shan sano oo dammaanad qaad ah oo loogu talagalay macaamiisha inay kala doortaan. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale u habeyn karnaa alaabooyinka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha si loo kordhiyo dammaanadda tayada ama cimriga nolosha illaa 7 ama xitaa 10 sano.
Waxaan ku siin karnaa adeegyada OEM iyo ODM macaamiisha. Waxaan awood u leenahay OEM ama sameeyn karnaa LOGO laser sifeyn bilaash ah, sidoo kale waxaan sidoo kale u habeyn karnaa sanduuqa midabka sidoo kale.
Ujeedada UNIKE waa "Tayada marka hore, Macaamiisha u janjeedha, is aaminaad, shirkad u qalma".
Shirkadeenu waxay leedahay dhowr shahaadooyin wax soo saar patent ah, alaabtayada badankood waa CE, RoHS, PSE, SAA iyo UL, iyo DLC oo la ansixiyay, kuwaas oo laga iibiyey in ka badan 100 waddan oo adduunka ah, ayna ku guuleysteen macaamiil kala duwan ammaan , iyo macaamiil badan si loo dhiso xiriir wada shaqeyn oo muddo dheer ah.